पानी को जात हुँदैन। | धर्म न्यूज | Dharmanews.com
पानीको जात हुॅंदैन
By Dharma News
बौद्ध दर्शन अन्धविश्वास र कसैको लहै-लहैका पछाडि लागेर हिड्दैन । अन्य धर्म-दर्शन को सापेक्षतामा यसमा लैङ्गिक स्वतन्त्रता, समानता, ज्ञान प्राप्ती र शीलआचरण उत्तम मानिन्छ । यसमा लागेका महिलाहरूको इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा र कदर वरद रूपमा भएको पाइन्छ । अतः यसलाई महिला मैत्री दर्शन पनि भनिन्छ । वुद्धको सम्बोधित ज्ञान प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा महिलाहरूको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक देन रहदै आएको छ । यस्ता प्रातः स्मरणीय प्राचीन महिलाहरूमा सुजाता, विशाखा, आम्रपाली आदिजस्तै सोणाको पनि नाम आउछ। तिनी को थिइन ? कसरी वुद्धसंघमा आइन् ? उनको प्रारम्भिक जीवन कथा यस्तो छ।
गौतम बुद्धलाई बुद्धत्व अर्थात् सत्य ज्ञान प्राप्त भए पछि उनले त्यसलाई जनतामा वाँड्दै हिड्न थाले । उनका कुराले मान्छेहरू हृदय देखिनै प्रभावित हुन्थ्यो। विशेष प्रभावित हुनेहरू बुद्धका पछि लाग्थे । तीमध्ये केही मान्छेहरू वीचवाटै फर्कन्थे भने केही चाँही चेला बन्थे । यिनै चेला मध्येका पनि अत्यन्त विश्वसनीय र नजीकका एक चेलाको नाम थियो आनन्द । उनी वुद्धवाणीका प्रमुख प्रचारक थिए । किनभने उनले बुद्धको दर्शन र बचनको मर्म आधारभूत रूपमा वुझेका थिए ।
एकपटकको कुरा हो । ज्ञान प्रचारकै प्रसङ्गमा आनन्द एउटा दुर्गम गाउँमा जाँदै थिए । बाटो अनकण्टार थियो । उनी लामो समयसम्म हिँड्दै रहे। गर्मीको समय थियो । मध्यान्न भइ सकेको थियो। उनी भोक, तिर्खा र गर्मीले ग्रस्त भएका थिए । यसमा पनि उनलाई तिर्खाले व्याकुल वनाएको थियो । यो पीडा जेनतेन समन गर्दै उनी अघि वढिरहेका थिए । जाँदै गर्दा बाटोमा अचानक एउटी किशोरीसँग भेट भयो। किशोरीले गाग्रीमा पानी लिएर आइरहेकी थिइन । पसिना चुहिरहेको किशोरीको अनुहार बाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो- उनले निकै टाढाबाट पानी लिएर आइरहेकी छन्। उनले गाग्री पिठ्यूमा बोकेकी र हातमा पानीले भरिएको लोहोटा समाएकी थिइन् । पानीका भाँडासहितकी ती किशोरीलाई देख्दा उनलाई साक्षात् मन्दाकिनी गङ्गा प्रकट भएजस्तो लाग्यो।
आनन्द किशोरीका नजिकै गए । एउटा भिक्षु महात्मालाई अचानक आफ्ना अगाडि देख्दा उनी वगिरहेको नदी पहाडले छेकेजस्तै शैलीमा रोकिइन् । आनन्दले उनी सँग अत्यन्त पीडित स्वर र आत्मीक शैलीमा भने- वहिनी म टाढाबाट आइरहेको छु। मलाई असाद्धै तिर्खा लागेको छ । पानी खान देऊ । आनन्द भिक्षु पोसाकमा थिए । उनको आग्रह सुॅंनेर किशोरी असाद्धै डराइन् । किनकी उनी चाण्डाल कन्या थिइन् । उनलाई थाहा थियो कि कुनै पनि उच्च जातका मान्छेले उनले छोएको पानी खान हुँदैन । अझ यिनी त महात्मा भिक्षु हुन् । पानीका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्। उनी साहै आत्तिइन् । केही बोल्न सकिनन् र टाउको जमिनतिर निहुराएर दाहिने खुट्टाको बुढी औंलाले जमिन खोतल्दै चुपचाप उभिइ रहिन् ।
आनंदले अत्यंत दयनीय अर्थात् व्याकुल स्वरमा फेरि भने- बहिनी तिमीले सुनिनौ ? मलाई अत्यन्त तिर्खा लागेको छ। यसै कारणले मेरो सास फुस्कलाजस्तो भएको छ । दया गर वहिनी मलाई पानी खान देऊ। उनको तड्पित् स्वर सुनेपछि किशोरीले विस्तारै टाउको उठाएर भिक्षुका अनुहार तिर हेरिन् । केही भन्न खोज्दै थिइन् तर उनको मुखबाट कुनै शब्द वाहिर निस्कन सकेन । मात्र उनका कलिला र रसिला ओॅंठहरू विस्तारै हल्लिए ।
आनंदले किशोरीलाई नयाँ दृष्टिले हेरे । उनका हातमा पानीले भरिएको भाँडा छ। अनुहारमा सौहाद्रता, सुन्दरता र पवित्रता छ । यसैवाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनको हृदयमा असीम करुणा छ तर पानी माग्दा दिइरहेकी छैनन् । यहाँ अवश्य पनि केही गहिरो कारण हुन सक्छ । यति सोचे पछि आनन्दले अत्यन्त मायालु र द्रवित स्वरमा सोधे- वहिनी तिम्रो खास समस्या के हो?
आनन्दको प्रश्न सुने पछि किशोरीले अत्यन्त सहृदयी भाव आत्मीय शैली र नम्र स्वरमा भनिन्- भन्ते मैले तपाईलाई कसरी पानी खान दिन सक्छु ? उनका कुरा सुने पछि आनन्दले अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक सोधे- किन वहिनी ? मलाई पानी दिंदा तिमीलाई के समस्या पर्छ ? सवै भन्छन्- तिर्खालुलाई पानी खान दिँदा धर्म हुन्छ । किशोरी आसाद्वै असामन्जस्यमा परेजस्तो अवस्थामा पुगे तापनि विचवीचमा रोकिएर विस्तारै भनिन्- महासय म चाण्डाल कन्या हूँ । यहाँ जस्तो माथिल्लो जातलाई चाहेर पनि कसरी पानी खुवाउन सक्छु ? थपिन् – मलाई असाद्धै पीडा भएको छ । जातले गर्दा आफूसँग पानी भएर पनि एउटा तिर्खाएको सभ्य मानिसलाई पानी खुवाउन सकिरहेकी छैन । किशोरीका कुरा सुने पछि आनन्दले सरल शैलीमा भने वहिनी मैले तिमीसँग पानी मागेको छु , जातजाती मागेको छैन । थपे -मैले मागेको वस्तुको एउटै जात हो पानी । पानीको जात हुँदैन।
आनंदका कुराले चाण्डाल कन्याको कताकता भित्रिहृदयमा छोएजस्तो लाग्यो । उनले आनन्दलाई पानीको लोहोटा दिइन् । आनन्द लोहा भरिएको पानी तन्तनी खाए र चरम सन्तुष्टिको अनुभूति गरे । यो घटना थाहा पाए पछि गाउँलेहरू दुवै (पानी खान दिने र खाने) लाई धर्मछाडा घोषणा गरे। आनन्दलाई त्यसले कुनै प्रभाव पारेन । उनले मान्छे त के कुनै प्राणीमा पनि भेदभाव राख्दैनथे। चाण्डाल कन्या पनि वुद्धसङ्घमा लागिन् । पछि उनी सोणा साधिकाका नामबाट विश्व प्रशिद्ध भइन् । यसरी दुवै धर्मछाडाहरू सदा सदाका लागि अमर भए ।
साभार : धर्म चक्षु पत्रिका
स्रोत : भाष्कर
नेपालमा थेरवाद र धर्मशीला गुरुमा
धर्मशीला गुरुमाः बाल्यकालः बुद्ध विहार स्थापनाः नेपालको थेरवादको प्राचीन इतिहास स्पष्ट छैन । सन् ६३६...
बौद्ध दर्शन अन्धविश्वास र कसैको लहै-लहैका पछाडि लागेर हिड्दैन । अन्य धर्म-दर्शन को सापेक्षतामा यसमा लैङ्गिक स्वतन्त्रता, समानता, ज्ञान प्राप्ती र...
बौद्ध धर्ममा ब्राम्हणहरुको स्थान
१. बौद्ध धर्मका सूत्रपात: २. बौद्ध-धर्ममा ब्राह्मणहरू प्रवेशः ३. ब्राह्मण हरूप्रति भगवान बुद्धः ...
निगलिहवा – कनकमणि बुद्धको जन्मस्थल।
कनकमणि बुद्धको उल्लेख मुख्यतया भद्रकल्पिका सूत्रमा गरिएको छ भने पाली पुस्तक बुद्ध वंश को २३ औं अध्यायमा पनि देख्न पाईन्छ।
!!! बुद्धिष्ट अध्ययन तथा अभ्यासकर्मीहरुका लागि खुशीको खबर !!!
साघा धावा महिनाभरि अनलाइन बुद्ध शिक्षा प्रवचन प्रत्यक्ष प्रसारण | जेठ ८ देखि असार ७, बिहान ८ बजे दैनिक
तथागत बुद्धका ३८ महामंगल सुत्त
(१) मूर्ख जनको कहिल्यै संगत नगर्नु ।(२) बुद्धिमानको संगत गर्नु ।(३) पुज्यको पुजा गर्नु । (४) अनुकूल स्थानमा मात्रै...
बर्मामा बौद्ध धर्मको सम्बन्ध र इतिहास
बर्मा नेपालीसँग पुरानो साइनो जोडिएको मुलुक हो । कुनै समय नेपालका पहाडी भूभागबाट लावालस्कर सहित बर्माका खेतीयोग्य भूमिमा बसाई जाने चलन थियो...
बुद्ध सम्बन्धि भ्रम
आनन्द पोखरेलभारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत २७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औं महासभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामी त्यो...
स्वयम्भू र बौद्ध स्तुपमा देखिने दुई आँखाको अर्थ
लामा सांगे लेग्देन भूपेनमहा स्तुप स्वयम्वु तथा बौद्ध आदि स्तुपाहरुमा देखिने दुई आखाको बारेमा अनेकौं भनाइ तथा अन्दाज हरु सुन्न पाईन्छ अनि आआफ्नै...
© Dharma News. सर्वाधिकार सुरक्षित | Developed by Mama Enterprises Pvt Ltd